နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းက ရှမ်းတောင်နှင့်မြောက်တို့တွင် အခြေခံပညာကျောင်းဆောင် ၃ဝဝ ကို တည်ဆောက? - Yangon Media Group
နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းအနေ ဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ်တွင် ၂ဝဝ၂ ခု နှစ်မှစတင်ပြီး အခြေခံပညာကျောင်း ဆောင်များဆောက်လုပ်မှုကို စ တင်ခဲ့ပြီး ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်တွင် ကျောင်း ပေါင်း၁ဝဝ၊ ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်မှ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်အထိ ကျောင်းပေါင်း ၁ဝဝ နှင့် ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်မှ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်အထိ ကျောင်းပေါင်းတစ်ရာတို့ကို ဆောက် လုပ်ပြီးစီးခဲ့ကြောင်း၊ ယခုလ ၃ ရက် နေ့တွင် ဖွင့်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့သော ရှမ်း ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် ရှိ လုံးဟေးမူလတန်းလွန် ကျောင်း ဆောင်သစ်သည် (၃ဝဝ) မြောက် ကျောင်းဆောင်ဖြစ်ကြောင်း အဆို ပါဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှ သိရသည်။
”ဂျပန်နိုင်ငံဟာ မြန်မာနိုင်ငံ ထက် ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ သဘာဝသယံဇာတ ဆိုတာ လုံးဝမရှိပါဘူး။ ပညာရေး လမ်းကြောင်းနဲ့သာ တိုးတက်မယ် လို့ယူဆတဲ့ သမိုင်းကြောင်းရှိခဲ့ပါ တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် သယံ ဇာတတွေကလည်း အများကြီးရှိ တယ်။ ဒါကြောင့် ပညာရေးဘက် မှာသာ ကောင်းကောင်းလုပ်ဆောင် မယ်ဆိုရင် ပိုတိုးတက်မယ်လို့ထင် ပါတယ်။ ဒီအတွက်ကြောင့် နောက် ဆိုရင်လည်း ကျောင်းတွေကို ဆက် လက်ဆောက်လုပ် လှူဒါန်းသွားမယ့် အစီအစဉ်တွေ ရှိပါတယ်”ဟု နီပွန် ဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌ မစ္စတာရိုဟဲ အိစစကာဝါက ပြောကြားသည်။ နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းအနေဖြင့် မြန် မာနိုင်ငံတွင် ကူညီထောက်ပံ့ပေး နေသော ပရောဂျက်ပေါင်း ငါးဆယ် ရှိပြီး စုစုပေါင်းတန်ဖိုးအားဖြင့် ဘီ လီယံတစ်ရာခန့် ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါ ပရောဂျက်များထဲတွင် ရှမ်း ပြည်နယ်အတွက် ကျောင်းဆောင် ၃ဝဝ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ကျောင်း ပေါင်း ၁ဝဝ၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသ ကြီးတွင် ကျောင်းပေါင်း ၆ဝ တို့ ကိုလည်း ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့ကြောင်း လာမည့်နှစ်တွင် ကယားပြည်နယ်ရှိ ကျောင်းများရှိ ကျောင်းဆောင်များ ကို တိုးချဲ့ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
”မိမိတို့နိုင်ငံဟာ ဖွံဖြိုးဆဲနိုင် ငံဖြစ်တဲ့အတွက် တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်များနဲ့ ဝေးလံခေါင်သီတဲ့ဒေသ တွေမှာ ကဏ္ဍပေါင်းစုံအတွက် အ ခြေခံအဆောက်အအုံတွေ များစွာ ရှိနေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ နီပွန်ဖောင် ဒေးရှင်းရဲ့ရန်ပုံငွေပံ့ပိုးမှုနဲ့ စေတနာ အဖွဲ့ရဲ့ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးမှုဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပညာရေးလိုအပ်ချက်ကို တစ်ထောင့် တစ်နေရာကနေ ဖြည့်စွက်ပံ့ပိုးပေး နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု နယ်စပ်ရေး ရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန် ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲအောင် က ပြောကြားသည်။
လုံးဟေး အခြေခံပညာမူလတန်းလွန် ကျောင်းဆောင်သစ်ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို အမျိုးသားလွှတ် တော်ဥက္ကဋ္ဌမန်းဝင်းခိုင်သန်း၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီး၊ ရှမ်း ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်၊ ဒေါက်တာ လင်းထွဋ်၊ ပအိုဝ်းကိုယ် ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ဦးစီးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌတို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိ ရသည်။
မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံတပ်ရင်းမှူးအဆင့်တွေ့ဆုံပြီး နှစ်နိုင်ငံညှိနှိုင်း၍ နယ်နိမ??